WAA MAXAY NOOCYADA KALA DUWAN EE FESCUE? - ALPINE FESCUE
Falscue - warshad dilka ah oo badar ah. Hawsha ugu muhiimsan ee cawska ayaa ah gaar ahaan qurxinta, waana sababta ay u jecel yihiin naqshadeeyayaasha muuqaalka. Tani waa geedka quruxda leh ee aad u qurux badan. Faa'iidada aan la iska-qaadin ee fescue waa in ay u adkaysata cudurada iyo dulin.
Fescue genus wuxuu leeyahay in ka badan 150 nooc, laakiin waxaan u aqoonsannay kuwa ugu caansan iyaga oo siinaya astaamahooda.
Nidaamka asaasiga ah ee feskani waa mid aad u qaro weyn leh. Sannadka saddexaad ee nolosha, dhirta ayaa ku kortaa hal naadi ah, oo abuuraya dhagax yar oo dusha sare ah. Caleemaha caadiga ah waxay gaaraan dherer ah 70 cm.
Miisaanka ugu weyn ee ugu weyn wuxuu ku dhacayaa dherer 10-30 cm dhulka. Wuxuu jecel yahay iftiin badan. Waxay leedahay dulqaad sare oo sarreeya iyo adkaysiga jiilaalka. Foomamka xayawaan jilicsan oo ah xayndaab cawl. Xilliga jimcaha waxaa la gooyaa dhirta 'alpine fescue'. Nidaamka muuqaalka waxaa lagula talinayaa in lagu beero geedka qeybta Moorishka, rabatok, iyo sidoo kale beeritaanka kooxda.
Tani waa warshad weyn oo qurux badan oo buluug ah-cagaaran. Fikradaha Amethyst waxay noqon doontaa quruxda dhabta ah ee beerta. Buundada qaangaarka ah waxay ka kooban tahay cufnaanta cufan ee wareegsan illaa 60 cm oo sarajoog ah, wuxuu si fiican u ubaxaa xilliga xagaaga. Caleemaha samaha ayaa sare u kacda dhuuban dhuuban oo ka sarraysa tirada guud ee caleemaha. Waxay leeyihiin qiimo qurxinta, sidaas darteed waa in la gooyaa si aan u lumin geedka. Marka la gaaro da'da toban jirka ah feskus ametystue waxay sameyneysaa daahir weyn oo gaaraysa hal mitir dhexdhexaad. Waxay si fiican u koraan on iftiin, carrada si fiican u dillaacday. Ha u dulqaadanin joojinta biyaha iyo jecel yahay iftiinka qorraxda, waxay ka heleysaa moolka iyo hodanka midabka.
Waa muhiim! Laguma talin in la gooyo carrada nafaqada iyo hooska, maadaama ay lumiso wax soo jiidasho leh.
Waxaa fiican in dhirta lagu beero kooxo 3-5 koobi ah. In dhaxan daran, caleemaha waxay noqon kartaa mid baraf ah, laakiin ka dibna si dhaqso ah ugu soo noqdaan caadi. In beerta u muuqdaan kuwo si wanaagsan u leh in foreground. Waxaa lagu beeray karaa qaababka qurxinta iyo xargaha alpine. Waxa kale oo ay u muuqataa qurux u dhow biyaha, ka soo horjeeda asalka dhagxaanta iyo dhagaxyada yaryar. Dabeecad kasta oo isku dhafan, beerta ubaxa qoraxda iyo dhagaxyada.
Nooca beeraha ee aagagga steppe. Cufan cufan-qaabka cufan leh leh midab buluug-cagaaran ee caleemaha, kaas oo siinayaa ubaxyada dhirta. Waxay leedahay dhuubo ilaa 40 cm, caleenta caleenta waa dhuuban ka yar millimitir oo kor u kacsan, laakiin si ka gaaban ayuu uga gaabsan yahay asliga, dibeddu waa adagtahay taabashada. Muddada ubaxu wuxuu yimaadaa dhammaadka May - bilowga Juun. Valissa fescue qorrax-jecel, jecel yahay meelaha qallalan iyo carrada ciidda. Si fiican u dulqaadanayaa qoyaan xad dhaaf ah. Wuxuu kari karaa hal meel ilaa shan sano. Fescue fescue waxaa loo isticmaalaa beeraha sida hoolka nool, iyo sidoo kale si fiican u dhirta dhir kale oo badan, si aan toos ahayn u adkeynaya quruxdiisa dabiiciga ah.
Ma taqaanaa? Qarniyadii hore, waxaa jiray luqad khaas ah oo ubax ah, oo loo yaqaan "tuulooyinka". Iyadoo ay jiraan, dadka inta lagu jiro bixinta ubaxyada qaarkood waxay muujiyeen dareen kasta oo dareen ah!
Midhaha ugu sareeya
Waxay ku koraan carrada caleemaha cagaarka ah iyo cows, iyo sidoo kale carrada sod-podzolic. Goobta ugu weyn waa geedka laysku qurxiyo oo leh caleemaha caleenta caleenta salka. Gacan-siinta hoos ayey udhacdaa ilaa hoose iyo adigoo taabanaya taabashada. Taarikada caleenta waa flat, oo aan lahayn feeraha dusha sare. Panicolle Panicolle oo si ballaaran u fidiya laamoodyo adag. Miisaanka loo yaqaan 'Spikelet Spikelet' ayaa leh daboolka maqaar. Qeybaha hoose ee ubaxa waxay ku adag yihiin dusha oo dhan waxayna leeyihiin dhererka qiyaastii 6 mm. Anther dhererka 3.5 mm. Ugxan-mareenka oo leh dhun diiran.
Fikrado suugaan ah
Waa dhir beerkiisu hooseeyo oo aan ka badnayn 15 cm sare. Xayawaan aad u qurux badan sababtoo ah caleemo dhuuban oo dhuuban. Waxay leedahay midab cagaaran oo cagaaran.
Waa warshad leh dhuuban, toosan afkoda ilaa 80 cm dheer iyo wax yar oo aan caleenta lahayn. Caleemaha dhirta caleenta cagaaran, cagaaran oo leh casaan casaan. Caleemaha waa ciriiri, oo dhererkiisu le'eg yahay, ilaa 40 cm dhererkoodu waa dherer badan yahay. Casaan furan waa baraf u adkaysi uuna si fiican u dulqaadanayo biyaha, iyo sidoo kale xitaa fatahaadda.
Haddii aad ka fekereyso sida loo beeray cawska dalka si ay u noqoto mid si fiican u siman, cagaar mugdi ah iyo cufan, noocan ah nooca fescue ayaa kugu habboon. Qoryaan ceelkan ah waa mid soo jiidasho leh maadaama ay tahay mid adag. Sannad kowaad, koritaanka cawska ayaa si aad ah u hooseysa, laakiin labadii sanno ee soo socota waxaa la sameeyaa rooga cagaar weyn. Sannadka afraad ee nolosha, si dhammaystiran ayuu u kobcayaa.
Casriga casriga ee naqshadda muuqaalka, sida sharaxaad soo jeedinayso, wuxuu ciyaaraa doorka sirta fasalka kowaad. Ujeedooyinkaas, waa inaad doorataa laba nooc oo dhirta: rhizomatous-rykhlokustovuyu iyo ryhlokustovuyu.
Tani waa digaag caan ah oo leh qulqulo dillaacsan oo gaaban. Qeybta kor ku xusan waa mid ciriiri ah, qalloocsan, oo aan ka badnayn 1.2 m sare. Caleemuhu waa ku siman yihiin, oo leh xajmiga dabeecada ee geesaha iyo qaybta sare. Wareegtoodu kama badna 5 mm. Saldhigga saxanka caleen waxaa jira dhegaha. Isku celcelinta dhererka dhererku wuxuu u dhexeeyaa 6 ilaa 20 cm, waxaa jira jilicsanaan jilicsan oo jilicsan.
Grasss ubax xagaaga. Foostada cagaaran waxaa ugu horreyn loo isticmaalaa in la sameeyo cawska. Intaa waxaa dheer, dhirta ay leedahay qiimaha sare ee feed.
Goobta kobaca ee koritaanka tufaaxa waa Buuraleyda Atlas ee kor u dhaafka laba kiiloomitir. Barkad kasta oo Myra ah waxay sameysaa buur hannaan qurux badan oo caws ah oo cagaar ah oo cagaaran ah ilaa 60 cm. Kalluunkani wuxuu u dulqaadanayaa kulaylka iyo joogitaanka biyaha. Waxay si tartiib ah u koraan, laakiin baadiyaha qaangaarka ah waa mid aad u adag. Mayeri wuxuu ku beeray sariiraha ubaxa, rabatki, isku dhafan iyo curbs.
Ma taqaanaa? Xaqiiqda ah in dhirta ay bini'aadanku u dhaqmaan sida aadanaha ayaa loo xaqiijiyay. Daraasad ayaa la sameeyay kaas oo mid ka mid ah ay jabiyeen tufaaxa ubax, iyo kan labaadna wuxuu ku dooday isaga oo leh daryeel gaar ah. Iyadoo gacan ka heleysa qalab gaar ah ayaa la duubay jawaab celin kala duwan oo laba qof ah.
Hoyga Daaruska - Pyrenees. Tani waa warshad aad u hooseeysa - ilaa 15 cm oo dherer leh baalalka. Caleemaha waa dhalaalaya oo qarsoodi ah, illaa 8 cm oo dherer ah, waxay ku jirtaa bisha Juun, miraha waxay diyaar u tahay July. Ka dib 2-3 sano oo kobcitaan ah, argagax foojignaadaan foomamka qashin barkin weyn. Waxay si fiican u koraan qorraxda, laakiin sidoo kale ma ka waabariistaan ​​goobo yar oo leh madoow.
Abuuraa qaybinta dhirta qaangaarka ah ee xilliga dayrta ama gu'ga. Jiilaalka ka dib, caleemo badan ayaa ku dhinta oo waxay u baahan yihiin in laga saaro guga horraanta. Waxay si deg-deg ah kor ugu qaadaan kobcintooda xitaa heerkulka hooseeya. Habboon ee dhagaxyo.
Cunto xayawaan ah
In dabeecadda, waxay ku koraan ee Ukraine iyo Western Europe. Warshad dabacsan oo dabacsan oo leh dhuuban, saddex xagal sare leh afkoda. Caleemaha waa mid jilicsan, dheer, dhuuban iyo caarada. Xaydhku waa mid aad u sarreeya, dabacsan, oo laamaha hoos u dhaca. Meelaha qiiqa cagaaran ee cagaaran.
Waxaa loo isticmaalaa cawska iyo sariiraha ubaxa waaweyn, waddooyinka iyo biyaha ku dhow. Beeridda cawska waa xirfad of fescue idaha. Waxay si fiican u koraan carrada qalalan, bacaadka ah iyo godka. Iyada oo bacriminta ay foomamka foomka clamaan cufan, oo si adag oo si qoto dheer u galaan qoto dheer galay ciidda. Si guul leh ayaa loogu dabaqay meelaha qallalan. Iyada oo ay sabab u tahay koritaanka hooseeya, waxaa si guul leh loo isticmaalaa maraqa qallalan. Cunto xayawaanku waxay u dulqaadaneysaa taraamid culus oo barata ilaa 3.5 cm, waxay si fiican u koraan qaybta hoose iyo geedo geedo ah. On carradu qallalan qallalan, fescada cas u noqdaan lammaane. Waxay sameeyaan roogga dabiiciga ah oo aan caadi ahayn oo leh saameynta shucaaca qaarkood.
Wakiilka ugu yar ee fescue leh katinkami yar. Waxay leedahay caleemo gaaban oo gaaban, laakiin dhirta waxay u muuqataa mid si qurux badan leh oo qurux badan u dhexaysa dhagaxyada. Dhamaadka xagaaga, waxay laamo ka soo baxaa yar yar oo ubax yar yar. Ilaa xilliga dayrta goor dambe, waxaad ku qancin kartaa inflorescences mugdiga muraayadaha fedrue. Waxay kobcisaa qaybta iyo abuurka.
Fare deeraha Siberian
Geedku wuxuu ku koraa dabeecadda Siberia, Manchuria iyo Mongolia on dabacsan, dhagaxyada iyo mararka qaarkood on sanduuqyada. Fierck Sibiran waa warshad dioecious oo leh caleemo cagaaran iftiin. Duufaan aan si fudud u dhicin oo laamo laamo ah. Miisaanka loo yaqaan 'Spikelet' ayaa ku dhawaad ​​gebi ahaanba dillaacsan, waana mid ka duwan kala duwanaanta miisaanka. Dhamaadkii ayaa si siman loo daboolay dibedda yar yar oo sarreeya oo tilmaamaya kor. Ovary on cufan sare iyo timo. Cirku waa bilaash, ka soo baxaa dhinaca ventral, oo leh caleemo dhaadheer oo qotodheer.
Cunto Hilibka (Calle)
Goobaha warshaduhu waa Bariga iyo Bartamaha Yurub, Dawladaha Baltic, Galbeedka Ukraine, Ural iyo Caucasus. Tani waa cawska daaqa oo yar yar oo leh caleemo buluug ah. Foornooyinka la isku qurxiyo ee wareegsan ilaa 60 cm caleemaha caleemaha waa cidhiidhi, irid toosan oo ka sameysan cawl-cagaaran oo buluug ah. Ka dib markii ubaxyada ubaxyada waxay noqdaan bunni fudud. Wakhtiga ubax ee bilaha Juun iyo Julaay. Caleemo caleemo leh ama midab buluug ah oo ku yaal dhul qallalan ama heather. Waxay u keentaa soo kabashada ee ka kooban qaybta sirqoollada. Waa geed geed kulul oo qulqulaya, waxay badanaa ku koraan carrada carrada-humus leh faleebo wanaagsan iyo aragti. Sun-jecel. Waxay qaadataa lime carrada. 4 sano kadib, geedka waa in loo qaybiyaa. Si aad u midhooto caleemaha ayaa ugu caansan, caleemaha waxay u baahan yihiin in la kala shubo labadii sanaba mar. Sanadaha qaboobaha, mira-buluug-buluug ayaa si adag u dillaacsan. Caadi ahaan waxaa loo isticmaalaa sida wax lagu daboolo dhulka, laakiin ilaalinta fayoobka oo eegaya wanaagga iyo qaabka hal dhinac waa mid aad u adag. Waxay u egtahay mid aad u fiican oo ah xargaha alpine oo ku kora carrada saboolka ah iyo qalalan.
Fikradaha calle waa mid hodan ku ah kala duwan duwan. Noocyo kala duwanaanshaha kala duwanaanshaha midabka, marmarka qaarkood farqigaas waa mid aan la qiyaasi karin. Qaar ka mid ah waa buluug badan, qaar kalena waa silvery. Sidoo kale kala duwan yihiin dhererka.
Ma taqaanaa? Ubaxa wuxuu leeyahay awood udub dhexaad ah wakhtiga. Sanadkii 1720, Carl Linnaeus wuxuu abuuray saacadda koowaad ee ubaxa aduunka ee magaalada yar ee Switzerland.